Nin 200 mas qaniinyadooda u badheedhay si uu dawo aadamaha badbaadisa u helo - BBC News Somali
Image caption Maska black mamba oo qaniinaya Tim Friede
Tim Friede oo ku nool gobolka Wisconsin ee Maraykanka, ayaa muuqaallo iska duuba isaga oo si badheeda isugu dhigaya qaniinyada masas sun badan oo ku baahiya muuqaaladaa YouTube.
Xanuun degdeg ah
Image caption Tim oo masas ka qaniineen labada gacmood ee dhiigaya.
Muuqaalada uu duubay midkood ayaa muujinaya isaga oo laba goor uu qaniinyo ku dhuftay maska halista ah ee black mamba oo isaga oo dhiig gacanta ka dareerayo hadana kamarada ku soo jeeda oo hadlaya.
Daawo mas naadir ah oo labo madax leh oo laga helay Mareykanka
"Qaniinyada black mamba waa xanuun. Waxay u dhigantaa kun shinni ah oo mar qudha kugu wada dhuftay. Shinnada qaneeniyadeeda waxa la socda hal ama laba milligiraam oo waabay ah, laakiin qaniinyada mamba waxa la socota 300 ilaa 500 miligiraam" ayuu BBC-da ku yidhi.
Dabadeed maxaa dhacay. "isla markiiba gacantaa barartay. Tusaale ahaan dhawrkii maalmood ee ka dambeeyey waan jiifay. Sidii gacantu ii barartay markaan eego. Waxaan qiyaasi karaa waabayda masku igu tufay xaddigeeda. Aad bay u xanuun kululayd." Ayuu yidhi.
Halis aan xeerka waafaqsanayn
Laakiin sida dadka YouTube ka daawadaa ula dhacsan yihiin oo kale dadkoo dhami ulama dhacsana.
Image caption Tim Friede jidhkiisu adkaysi buu u yeeshay qaniinyada masaska
"Waxa dadka noocaas ahi sameeyaan ma garan karno. Arintani waa fal halis ah oo bilaa akhlaaq ah. Wax wada shaqayn ahi nama dhex mari karto" ayuu yidhi Dr Stuart Ainsowrth oo ka tirsan kulliyada Tropical Medicine ee jaamacadda Liverpool.
"Dadka qaar baa iyagu isku tijaabiya waabayda, laakiin falalkaasi waa halis oo waa loo dhiman karaa. Waxaana haboon in aan dadku sidaa yeelin" ayuu yidhi Dr Ainsworth.
"Ma jiraan xeerar wax soo saar, bad qab amaba tayada dawada" oo dunidu ka midaysan tahay, sida uu sheego ururka fadhigiisu yahay Ingiriiska ee Wellcome Trust oo ka mid ah ururada u xusul duubaya in la helo talaal cusub oo cilmiyeysan oo dunida loo helo.
"Waxan aan samaynayo uma sameeyo uun YouTube ha laga daawado. Waxan doonayaa in aan dad ku badbaadiyo. Sababta keli ah een YouTube u adeegsadaa waxay ahayd inaan helo dhakhaatiirta haatan ila shaqaysa. Halis weyn baan u badheedhay waanan ku guulaystay," ayuu yidhi.
Image caption Tim Friede oo dadka tusaya masaska uu haysto midkood
"Hadii aanad adkaysi buuxa u lahayn waabayda masaska qaarkood sida black mamba, waxay wax yeeshaa habdhiska neefsiga, taas oo ka dhigan in muruqyada sambabada ka shaqaysiiyaa fadhiistaan oo aad neefsan kari weydo, indhaa ku xidhmaya oo ma socon karaysid. Laakiin ma gaadho maskaxda oo qofku ilaa inta uu dhimanayo wax wuu kala garanayaa" ayuu yidhi Friede.
Qaniinyada Cobra-hu waa halis
Friede wuxu daaradda gurigiisa ku haystaa tiro masaska halista badan leh ah oo uu qaniinyadooda isku tijaabiyo.
Image caption black Mamba waabaysiisa 30 daqiiqo wax ka yar baa qofku u dhintaa
"Waxaan haystaa Cobra Afrika laga keenay. Qaniinyadiisu waa halis. Aad bay u xanuun kululayd."
"Cobraha noocyadooda kale waabaydooda waxa ku jira maadada Cytotoxin xubnaha jidhka naafaysa, sida gacan ama far."
Friede wuxu ku shaqeeyaa aragtida ah in xaddi waabay ah oo yar jidhka qofka ay gasho si taasi u suurto geliso si uu jidhku u samaysto hab dhis difaac oo uu kaga hortago waabaydaa marka dambe laakiin aragtidiisaa aad baa loo dhaleeceeyey.
Jidhku inuu adkaysi u yeesho
Hab kaa la mid ah, oo lagu soo tijaabiyey xawayaan, ayaa suurto geliyey in la helo dawada waabayda ee haatan jirta.
Image caption Nin masaska carbiya oo Pakistani ah
Habka soo saarka dawada waabaydu waxba iskama bedelin ta iyo qarnigii 19-aad. Xaddi yar oo waabay ah ayaa lagu mudaa fardo ama ido ka dib ayaa hadana madaada Antibodies la yidhaa laga soo qaadaa dhiigga xawayaankaas.
"Waxaan halkan ku hayaa xawayaankaa i dili kara, anna ma doonayo in aan dhinto. Markaa anigii baa noqday faraskii. Maxaan adkaysi ugu yeelan wayne waabayda?" ayuu yidhi Friede.
Ninkan 51 jirka ah ee baabuurta xamuulka wadi jiray ma aha qof ku takhasusay daryeelka habka adkaysiga jidhka, xataa weligii jaamacad muu gelin. Cabsida uu ka qabay in mas halis ah uu qaniinyadii u dhinto ayaa ku kalliftay inuu habkan aan qumanayn bilaabo 20 sano ka hor.
Nin u dhintay qaniinyada mas Abris ah oo uu korsanayay
Markii ugu horaysay wuxu ku bilaabay caaroda iyo dib-qallooca markii dambena wuxu u gudbay masaska Cobra-ha.
"Masaska suntan badan ee dunidoo dhan iskumaan dhigin, waxaan soo urursaday kuwa markay kugu dhuftan ba aad dhimanayso"
Nabarro badan baa ku yaal marna waabu u dhiman gaadhay tijaabooyinka uu sameeyo. Sidaas oo ay tahay ayuu hadana ku faranxsan yahay in masas qaniineen oo uu ka kacay iyada oo aanu dawo helin.
14 Disembar 2018